RED CURRANT "NATALIE": SHARAXAADDA KALA DUWANAANTA, SAWIRRADA, BEERITAANKA IYO DARYEELKA - CURRANT
Kala duwan ee currant "Natalie": sifooyinka, siraha ee beerashada guul leh
In ku dhowaad beerta oo dhan waxaad ka heli kartaa goob jilicsan oo leh faafinta duurka of currant cas, qurxin leh gunta casaan badan. Daryeelka xilliga caadiga ah, dhalidda wanaagsan iyo qaabka caadiga ah ee faa'iido leh ee miraha bislaaday - kuwani waa sababaha ugu muhiimsan ee dalagga u yahay mid aad u jecel beeraley badan. Maqaalkani, waxaan dooneynaa inaan kuu soo bandhigno "Natalie" - noocyo aan caadi ahayn oo miro ah oo ah currants cas oo qalbi furmi kara.
Noocyada kala duwan ee Natali waxay ahaayeen V. M. Litvinov iyo N. K. Smolyaninova, jinsiyado Ruush ah oo ka soo jeeda Machadka Beeraha Dhaqanka, GNU VTISP.
Sanadkii 1991, adoo ka gudbaya noocyo kala duwan oo ah currant cas, noocyo cusub ayaa la nadiifiyey, isku darka daryeel aan qabyo ahayn iyo iska caabin aad u sareeya oo barafoobay iyo cudurro saameynaya dalagyada dhirta.
Akhri faahfaahinta iyo isbarbardhigga noocyada sii kordhaya ee casriga ah "Vixne", "Sugar".
Tixgeli sharaxaadda iyo astaamaha dhirta iyo berry ee noocyo currant cas oo "Natalie".
Buundada ee currant cas oo dherer ah waxay gaartaa hal mitir iyo badh. On a weyn buug caafimaad qaba koraan ugu yaraan 15 caleemo. Jilifka on lafaha waa midabka midab leh cawl-brown, iyo caleemaha yar yar waxay leeyihiin talooyin casaan on dushooda. Caleemaha waa caajis, mid dhexdhexaad ah, midab cagaaran, oo soo gashanaya madow cagaaran ee qorraxda. Daaqdu waa mid qaro weyn lehna is waafajin - Laamood caleemo ayaa si weyn kor ugu kaca sannadaha ugu horreeya, sida ay koreyso, waxay noqotaa faafin dheeraad ah.
Ma taqaanaa? Laga soo bilaabo caleemaha qalajiyey ee currants cas iyo madow waxaad heli doontaa a fitamiin aad u dhadhan fiican leh iyo caafimaad leh. Si ay caleemaha ku jirto inta ugu badan ee fitamiin C, waxay u baahan yihiin in la ururiyo ka hor inta aan berry ah si buuxda u bislaaday. Waxaa la cadeeyay in ka dib markii ay kobocdo xaddiga fitamiin C ayaa la dhimay dhowr jeer.
Burushka leh berry koraya on laamood dhuuban yahay 10 cm dherer. On burush kasta oo ku wareegsan berry ah oo midabkiisu casual ah, mid xoogaa yar ee saldhigga. Celceliska miisaanka ee berry waa 0.7-1.0 g. Jidhku waa casiir leh qadar yar oo abuur ah gudaha. Dhadhanka macaan ayaa leh macaan.
Qaar ka mid ah muuqaalada kala duwan
Kala duwan Tani waxay leedahay qaar ka mid ah sifooyinka qaarkood oo ay u jecel yihiin by bannaanka u badan, iyo waxay sidoo kale si fiican u kala saaro "Natalie" noocyo kale oo currant cas. Waan ka warbixin doonaa iyaga si faahfaahsan.
Mid ka mid ah "Natalie's" faa'iidooyinkeeda waa xasilooni wanaagsan in cudurada beerta badan, iyo sidoo kale saameynta cayayaanka. Si kastaba ha ahaatee, doorashada khaldan ee goobta beerta iyo xadgudub ah ee agrotechnology ee currant casaan sii kordhaya waxay yarayn kartaa difaaca dhirta iyo ka dhigtaa more u nugul wakiilada sababaha dhirta sida. cudurada fangas:
Macaanka dhoobo waa cudur aan awood u lahayn inuu ku dhaco oo keliya geedka, laakiin sidoo kale ciidda ku hareeraysan, iyo sidoo kale si deg deg ah u faafa dalagyo beerta kale. Si loo daweeyo caarada budada, fangasideedka nidaamsan ayaa loo isticmaalaa in lagu daweeyo dhirta saameeya iyo carrada hoosteeda. Wixii ka hortagga isticmaalka xal xal, kaas oo buufinayay duurka dhowr jeer xagaaga.
Anthracnose - cudurkeedu wuxuu bilaabmaa inuu si firfircoon u dhufto maalmaha roobka iyo huurka badan. Si aad u baabi'iso of spores ee fangaska this loo isticmaalo buufinta dareeraha Bordeaux ama sulphate copper. Ka hortagga cudurrada waxaa ka mid ah ka takhalusidda waraabinta xad dhaafka ah ee duurka currant, manjooyin go'an oo caleemo, iyo sidoo kale ka saarista caleemaha dhacday iyo cawska sii kordhaya ee geedka.
Septoria waa cudur khatar ah oo gabi ahaanba burburin kara goosashadaada. Wixii daaweynta cudurkan, ku buufin duurka u leh fungicides nidaamka. Ficillada ficil-celinta waxaa ka mid ah samaynta xilliga caleenta caleemaha, ka saarista cawska hoostiisa, iyo mulching.
Si loo xakameeyo cayayaanka ee currant cas (aphid caleen, miro yar oo sawfly ah, weelka miraha dufanka leh) waxay isticmaalaan sunta cayayaanka ee kala duwan ee loo isticmaalo in lagu daaweeyo qaybaha waxyeellada geedka - "Fitoverm", "Agravertin", "Iskra DE".
Baro sida loo ilaaliyo currants cudurrada iyo cayayaanka.
Tallaabooyinka ka hortaga waxaa ka mid ah:
saarista caleemaha saameeyay iyo caleemaha;
dayrta dayrta ee carrada ku wareegsan ku xoortay geedihii;
dheeriga ah ee dheeraadka ah ee qoryaha qoryaha ah ee ciidda.
Waa muhiim! Waxaa suurtagal ah in la iska ilaaliyo cayayaanka ka soo currant casaanka by beerto sariiraha ubaxyo udgoon ee ku xiga duurka. Tusaale ahaan, marigolds - carafo xoog leh waxay ka cabsiin kartaa cayayaanka ugu badan ee sariiro beertaada.
Cadaadiska abaarta iyo caabbinta barafowga
"Natalie" - noocyo kala duwan oo qoyaan lehlaakiin waxay u dulqaadataa maalmaha qallalan ee xagaaga. Waxaa muhiim ah in la ogaado in la'aanta qoyaanka inta lagu jiro ubax iyo samaynta berry ay si xun u saameeyaan dhalidda mustaqbalka ee currants cas. Si looga hortago tan, fiiro gaar ah u yeelashada waraabinta joogtada ah ee waqtigan gaarka ah.
Kala duwanaantu ma aha mid cabsida qabow oo waxay ku noolaan kartaa dhaxan -30 ° C Haddii heerkulka hooseeya la filayo, ka dibna duurka waxay u baahan yihiin qarin dheeraad ah xilliga qaboobaha.
Cawska iyo bisil
Fasalkan dhexaadinta hore ee qaangaarka, nooca ugu horeeya ee aad ku raaxaysan karto bartamaha bisha July. Waxaa intaa dheer, waxaa suurtagal ah in la ururiyo ilaa 4 kg oo ah nooca macaan-macaan oo macaan leh oo ka yimid baadiyaha hal ah ee currant cas. Awoodda sare ee "Natalie" ayaa si fiican u kala soocaya noocyada kala duwan ee noocyada kale ee currants beerta.
Natalie "kala duwan gaadiid aad u fiican fogaanta fogiyada oo aan lumin sheekada iyo dhadhanka. Si loo ilaaliyo inta ugu badan ee dalagyada la goosto xilliga gaadiidka, beeralayda khibrad leh waxay kugula talinayaan inay qaadaan "Natalie" ee weel yar, sidaas darteed waxaad xaqiijin doontaa ammaanka lakabka hoose ee berry.
Ma taqaanaa? Noocyada currant diga ayaa laga heli karaa xitaa Siberia. Laakiin Australia iyo Antarctica, nooc noocan ah ma koraan.
Tani waa miis maskaxeed oo guud ah. Dhab ahaantii, tani macnaheedu waa in berry kuwan si siman u dheelitiran oo caafimaad leh foomka cusub iyo barafoobay. Sidoo kale, si ammaan ah ayaad u samayn kartaa jamsi, wax ka dhejis iyo ku darso keega - dhadhan badan iyo dhadhanka ma waayaan xitaa ka dib marka daaweynta kulaylka.
Baro raashinka si aad u diyaarisid currants cas: macaanka, macaanka, qasacadeysan.
Xulashada geedo currant guduud waa arrin aad u muhiim ah, sababtoo ah tayada iyo tirada dalaggaaga mustaqbalka waxay ku xiran tahay tayada wax beeritaanka. Waxaan kuu diyaarsanahay macluumaad muhiim ah oo ku saabsan sida caafimaadka iyo diyaar u ah beeritaanka dibadda waa inay u ekaataa. seedling currant cas:
Dhalinta kasta waa inay lahaataa laba kabo oo xoog leh oo leh dherer ah ugu yaraan 30 cm.
Baadhitaan walbaa waa inuu ahaadaa ugu yaraan laba buruun oo caafimaad leh.
Nidaamka asaasiga ah waa inuu ka kooban yahay 3-4 koorsooyin jaalaha ah.
Geedaha lateral si fiican loo horumariyo oo ku koraan tiro badan.
Beerta khibrad leh ayaa lagula talinayaa in ay iibsadaan geedo dalagyo beerta ah oo ku yaal xannaanooyin gaar ah ama xannaanooyin. Sidaa darteed waxaad heli doontaa damaanad ah in noocyada kala duwan ee aad heshay ay tahay mid aad rabto, iyo macquulnimada in abuurku uu noqon doono tayad liidata oo leh cudur ama cayayaanka ayaa noqon doona mid aad u yar.
Waa muhiim! Haddii aadan qorsheynin inaad ku beeri geedo ku helay dhul furan, hubi in nidaamka xididka currant casaan ma qalalaan. Ku duub xididada dhar qoyan ama meel dhigo geedo baaldi ah oo wada hadalka dhulka (isku dar ah ee ciidda iyo biyaha, keena joogtada ah ee kareemka labeen dhanaan).
Inkasta oo ay fududahay daryeelka, kala duwanaanta "Natalie" waxay leedahay mid gaar ah shuruudaha deegaanka. Aynu u sheegno iyaga si faahfaahsan:
Ciid. Si aad u wanaagsan iyo caleemaha xoog leh, currants cas oo u baahan chernozem, loamy iyo carrada ciidda ciidda ah oo awood u leh in ay hayso qoyaan naftooda (laakiin waa in aysan istaagin). Intaa waxaa dheer, in noocyada noocan ah ee carrada ku nool yihiin tiro badan oo ka mid ah sheyga faa'iido leh kuwaas oo ka caawiya xididada currant cas si aad u hesho waxyaabaha muhiimka ah. Nooc-celinta lagu taliyey waa wax yar acidic ama dhexdhexaad ah.
Goobta munaasabka ah ee dhulka. Dooro meel fiican oo iftiin ah goobta, waa wax la jecel yahay in ay ahayd jilicsanaan xagga jihada waqooyi-galbeed, oo ka fog diyaaradaha iyo dabaysha qabow.
Socodka biyaha dhulka. Biyaha hoose waa inaanay ka dhawaajin ilaa 1 m dusha sare. Dhowr u dhowaanshaha nidaamka xididka ee currants cas ayaa sababi kara geeddi-socodka ah ee ay qoyaan, iyo sidoo kale cudurada fungal xanuujin.
Waqtiga iyo nidaamka dejinta
Beerto geedo currant guduud ah waa suurtogal laba jeer sannadkii: Dabayaaqadii Abriil - horraantii May iyo dhammaadkii Sebtembar - horraantii Oktoobar. Waxa ugu muhiimsan waa in ciidda waa in ay ahaato diirimaad ku filan (heerkulka ciidda waa in aanay ka yarayn +15 ° C), qoyan roobabkii dhawaan, iyo sidoo kale qaab dhismeedka dabacsan.
Baro wax badan oo ku saabsan murugada of currants beerto ee dayrta iyo guga.
Ka dib markii la doortay meesha ugu fiican ee lagu beero geedo, u diyaar garow goobtan ka hor inta aanad bilaabin shaqada - nadiifi ciidda ka soo cawska iyo xididdada dhirta kale, si taxadar leh u qodo aagga oo ku dar bacriminta. Waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo isku dar ah humus, ash qoryaha iyo superphosphate - qaso bacriminta soo baxay ee ciidda iyo si siman u qaybiyaan gudahood hal mitir oo mitir ah goobta loogu talagalay beeritaanka loogu talagalay ee kasta baadiyaha. Xasuuso in bacriminta isku dhafan ee isku dhafan ay sababi karaan gubasho gubasho iyo burburinta dhirta.
Ka dib markii aad soo iibsatay geedo Natalie ah oo dhameystiray shaqada u diyaargarowga goobta, waa waqtigii lagu beeray duurka currant yar yar ee dhulka furan. Cabbirka lagu taliyey ee godadka beerta waa 60 * 60cm. Lakabka yaryar ee isku dar ah ee ciidda iyo bacriminta ayaa ku shubay hoosta waxayna ku shubtay ugu yaraan kala badh baaldi biyo ah. Geedo la diyaariyey waxaa la dhigayaa bartamaha god, si tartiib ah toosinta nidaamka xididka iyo daboolay ciidda. Rooti-doonka: a - meelo koriinka ah, b - rooti xidid ah. Ka taxadar qoorta xididka - waa inay ka sarreeyaan dhulka. Si aad u dardar geliso duurka waxay ahayd meel ku filan oo loogu talagalay horumarinta buuxda ee caleemaha, ka tag masaafada u dhexeysa duurka 1-1.5 m.
Ma taqaanaa? Markaad cunaysay kaliya 30-45 berry ah-macaan oo dufan currant, waxaad ku qancin doonaa baahida maalin kasta ee jirkaada fitamiin C.
Astaamaha daryeelka xilliyeed
Si currant cas si fiican u koraan oo aad ku faraxsan tahay goosashada wanaagsan, waxaa muhiim ah in la ogaado asaasiga ah ee daryeelka xilliyeed ee dalagga beerta this.
Xilliga xagaaga, currants guduud ah ayaa la waraabiyaa toddobaadkii hal mar, iyo maalmaha gaar ahaan kulul, waraabinta ayaa la kordhiyaa 2 jeer toddobaadkii. Waraabinta lagu taliyay - 1.5-2 baaldiyo biyo ah oo kululeynaya heerkulka hawada. Hababka biyaha ayaa si gaar ah muhiim u ah inta lagu jiro Bisaylkiisa ee berry - inta lagu jiro mudadaas waxaa lagu talinayaa in waraabiyo dhirta maalin kasta.
Daryeelka carrada waa mulching khasab ah. Wixii kala duwan ee Natalie, mulch ugu faa'iido badan waa slurry ama silsilad dhiiqo. Nidaamkani wuxuu ka caawiyaa ma aha oo kaliya in uu ku hayo qoyaanka ciidda, laakiin sidoo kale waxa uu ka qayb qaataa jaangooyooyin leh waxyaabo faa'iido leh oo leh saameyn ku leh koritaanka caleemaha iyo tayada dalagga. Waa in sidoo kale dib loo soo celiyaa baahida loo qabo dabacsanaanta joogtada ah ee bannaanka ka jirta baadiyaha iyo ka saarista cawska, laakiin adoo isticmaalaya mulching carrada waxaad samayn kartaa iyada oo aan ka ahayn nidaamyadan.
Waxaan kugula talineynaa inaad ka akhrido daryeelka dakhliga xilliga guga iyo dayrta.
Duurka udgoon ee cagaaran waxay bilaabaan inay u baahan yihiin bacarin joogto ah sanadka saddexaad ee nolosha. Guga, inta badan Bacriminta organic waxaa laga codsadaa - humus ama compost, taas oo waa in lagu qasi jiray biyo ka hor isticmaalka. Xilliga dayrta, ku darso macdanta macdanta culus ee ku salaysan potassium, fosfooraska iyo nitrogen. Noocyada noocan ah ee bacriminta waxaa lagu qasan yahay ciida carrada dayrta xilliga dayrta.
Xilliga xagaaga, duurka waxay si joogta ah ugu baahan yihiin manjooyin. Geeddi ugu horeysay waxaa la fuliyaa guga hore - waxaa muhiim ah in la helo waqti ka hor dhirta "toosi" oo ay bilaabaan socodka dheecaan ee laanta. Goobabkan waxaa ka mid ah ka saarista caleemaha qalalan, jirdilka ah iyo kuwa waxyeelloobay. Kadib qaabsocodka, dhammaan xayawaanka waxaa lagu baaraandegaa kaarbiidh firfircoon. Muddo ka dib, laamood oo si qoto dheer u kordha baadiyaha, iyo sidoo kale meelo aad u qoto dheer, ayaa lagula kulmey dib-u-jarid. Haddii aan la qaloocin, hawada iyo iftiinka qorraxdu ma gaari doonaan laanaha fog, iyo berry ayaa la sameyn doonaa oo keliya marka la barbar dhigo barxadda bannaanka duurka.
Waraaqo nadiifin ah oo marmar ah ayaa lagu soo celin karaa, kuwaas oo ay ka mid yihiin:
ka saarista laamaha jaban oo la qalajiyey;
jarida caleemaha iyo caleemaha calaamadaha cudur ama cayayaanka waxyeello leh;
ka saarista laamood ee aan la kicin oo leh tiro yar oo burooyinkeeda ah.
Sidoo kale, sida baadiyaha u koraa qorshaynta baadiyaha qorshaysan:
sannadka saddexaad, sare ee duurka waa la gooyaa by 10-15 cm, oo ka mid ah dhammaan laamaha, 5-7 of ugu xoogga badan iyo tiro badan oo burooyinkeeda ayaa ka tagay, taas oo markaas noqdaan saldhigga baadiyaha;
ee sannadka shanaad, manjooyin dib u soo celi caleemaha waxaa la fuliyaa iyo, haddii loo baahdo, khafiifiyey baxay duurka ee currant cas;
sannaddii toddobaad, waxay sameeyaan manjooyin ku habboon ee caleemaha, caleemaha da'da ah iyo deformed ayaa laga saaraa.
Ka hor goynta, hubso in xamaamyada beertaada ay kuugu filan yihiin, haddii kale waxaad ku jiidi doontaa laamaha, taasoo keeni karta dhimashadooda.
Waa muhiim! Marka goosashada currant cas, waa in aad marka hore kor u sprig, oo kaliya ka dibna soo qaado berry. Habkani wuxuu ka caawiyaa ilaalinta sharafnimada midhaha cusub, taas oo aad muhiim u ah abuuritaanka berry cusub ee xilli ciyaareedka soo socda.
Ilaalinta qabowga qabowga qaboobaha
In kasta oo xaqiiqda ah in "Natalie" uusan ka cabsanin dhaxan xilliga qaboobaha, ha dayacin duurka u qarinaya jiilaalka. Waxaa ugu wanaagsan in la daboolo baadiyaha iyo meelaha ku wareegsan duurka iyagoo leh lakab qaro oo qoyan ama dhadhanka wabiga ah, mulching sida jiilaalka oo kaliya ma badbaadiyo currants casaan qabow, laakiin sidoo kale u adeegtaa sida ilaalinta aad u fiican jiirka iyo cayayaanka kale yaryar kuwaas oo aan u leexan si ay u cunaan caleemo khafiif ah.
Dooro ugu weyn mudnaanta noocyo of currant casaan "Natalie":
dhalidda sare iyo midho-dhalid dheer;
awoodda ay u leedahay in ay soo qaadaan berry wixii fog ee fog ee aan laheyn qaabkooda iyo dhadhankooda;
caabbinta wanaagsan ee dhaxanta jiilaalka;
caabbinta wanaagsan ee cudurada beerta badan.
Sida ay sheegeen bannaanka u badan, kaliya faa'iido la'aan "Natalie" waxaa loogu yeeri karaa in la yareeyo caleemaha iyada oo miisaankeedu yahay nooca berry ee meelaha kala duwan. Marka laga beerto geedo on goobta waa in ay tixgeliyaan muuqaalkan of kala duwan oo ka tago meel dheeraad ah u dhexeeya duurka.
Faallooyinka ku saabsan fasal ee currant cas oo "Natalie"
Waxaan u isticmaalnay noocyo kala duwan oo Natalie ah, dhadhanka berry wuxuu ahaa mid aad u wanaagsan, laakiin sababo ay sabab u tahay baadiyaha ayaa aad u jiran oo ay ahayd in laga takhaluso :-(
Waxaan jeclahay noocyada kala duwan ee currant cas "Natalie". Marka xigta Jonkheer Van Tets, Natalie waa mid aad u xiiso leh labadaba dhadhanka iyo dhalidda, iyo berry ayaa laga yaabaa in ay ka weyn tahay.
Adigoo isticmaalaya taladayada ku saabsan kordhinta noocyada Natali ee ku yaala xaafadaada, bartamaha xagaaga waxaad awoodi doontaa inaad soo qaadato qadar badan oo miro leh oo aad u caafimaad leh, halka beergooyinku ay ku filnaan doonaan inay ku hayso jiilaalka.